Zwe Thet Paing, Author at Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » About Zwe Thet Paing
About Zwe Thet Paing
Zwe Thet Paing | Jokes | November 24, 2017
ဘယ်ဗေဒင်မှ မေးစရာမလိုဘူ။ ခင်ဗျားဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ ကျုပ်တပ်အပ်ပြောပြမယ်။ အိုခေ ?
Zwe Thet Paing | Food, Knowledge | October 11, 2017
သစ်သီးဝလံများစားသုံးခြင်းဟာ အသားအရည်ကိုစိုပြေလှပစေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လဲအထောက်အကူ ပြုစေပါတယ်။ အသုံးဝင်သောသစ်သီးဝလံများ များစွာရှိတဲ့အနက် ငှက်ပျောသီးဟာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာဖြင့် ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ အပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငှက်ပျောသီးအမျိုးပေါင်းစုံကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဖီးကြမ်း၊ သီးမွှေး၊ ရခိုင်ငှက်ပျောသီး၊ ရွှေငှက်ပျောသီး စသဖြင့် အမျိုးအစားစုံလင်လှပါတယ်။
Zwe Thet Paing | Food | October 10, 2017
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ဂဃနဏမသိသောသူတစ်ယောက်အား မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောပြခွင့်ရမယ်ဆို ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာသာရနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာတွေကိုလဲ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းပြောဆိုရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အများအပြားလာရောက်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ လှည့်ခရီးသွားများအား စွဲဆောင်နိုင်သော ရိုးရာအစားအစာများ များစွာရှိသည်ကို သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အထဲမှ အရသာရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ အပေါများဆုံးရနိုင်တဲ့ အစားအစာအချို့အားဖော်ပြပေးလိုက်ရပါ တယ်။
Zwe Thet Paing | Knowledge | September 28, 2017
သွားတိုက်ဆေးကို သွားများကြံ့ခိုင်သန်မာဖို့နှင့် သွားများဖြူဖွေးဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွားတိုက်ဆေးကို တခြားနည်းလမ်းများနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သွားတိုက်ဆေးကို အလှအပနှင့် တခြားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများမှာ အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Zwe Thet Paing | Travel | September 27, 2017
ကျွန်တော်တို့ခရီးတစ်ခုထွက်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြရပါတယ်။ များ သောအားဖြင့် အဝေးပြေးကား (ဒါမှမဟုတ်) လေယာဉ်နဲ့ သွားကြတာများပါတယ်။ ရထားနဲ့သွား ဖို့ကိုတော့ လူတော်တော်များများ တွန့်ဆုတ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ယခင်မီးရထားလမ်းစနစ်များကလဲ တော်တော်လေး နိမ့်ပါးခဲ့သောကြောင့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် မီးရထားဖြင့်ခရီးဝေးသွားခြင်းကို လက်ရှောင်ကြခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်းကို အဆင့်မြှင့်တင် လျက်ရှိရာ အတော်ပင်ခရီးရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရထားနဲ့စိတ်အေးချမ်းသာစွာခရီးသွားလာ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရထားနဲ့ခရီးသွားခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
သွားကျန်းမာရေးအတွက် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အလေ့အကျင့်ဆိုးများ
Zwe Thet Paing | Health | September 26, 2017
သွားနာ၊ သွားကိုက်ခြင်းဟာနာကျင်မှုတွေထဲမှာ အဆိုးရွားဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါး သွားရောဂါ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာအလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကို အမြဲပြုလုပ်နေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် သွားနာခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အလေ့အကျင့်ဆိုးများကို ဖော် ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း ရေသောက်ပေးပါက ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးထူးများ
Zwe Thet Paing | Health | September 25, 2017
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းနှစ်တုန်းက မြန်မာစာသင်တဲ့ဆရာတစ်ယောက်ပြောတာမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း ရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အပူအပုပ်တွေကို ကင်းစင်စေပြီး အသားအရေကိုကြည်လင်စေတယ် လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လဲ လိုက်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါ ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းအကျိုးရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တတ်သူများ အတွက်လဲ ဝမ်းကိုပုံမှန်သွားစေပါတယ်။ ထိုသို့အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေသောကြောင့် ကျွန်တော်အင်တာနက် ထဲက သေချာလေ့လာထားသမျှကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုပါတယ်။
Zwe Thet Paing | Health, Knowledge | September 22, 2017
နေပူထဲကို ထီး(ဒါမှမဟုတ်) ဦးထုပ်မပါဘဲ သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထိခိုက်မိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများလိုု့ပဲဖြစ် ဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံမှာနှာခေါင်းသွေးလျှံတက်ပါတယ်။ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်းဟာ ကလေးများသာမက လူကြီး များတွင်လဲဖြစ် တတ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းအားကုပ်ဖဲ့မိခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်းများမှ နှာခေါင်းသွေးလျှံ တက်ပါတယ်။ ထိုသို့နှာခေါင်းသွေးလျှံလာလျှင် ပြုလုပ်ရမယ့်ကုသနည်းများ ကိုတင်ပြလို ပါတယ်။
လွယ်လွယ်နဲ့ ဒေါသထွက်တတ်တဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ
Zwe Thet Paing | Knowledge, Motivation | September 21, 2017
ဒေါသထွက်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒေါသထွက် ခြင်းဟာမကောင်းမှန်းတော့သိကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒေါသထွက်လွယ်သူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ထိန်းချုပ်ဖို့ရာခက်ခဲလှပါတယ်။ သူ့အတွက် အရာရာတိုင်း၊ ကြုံဆုံလာသမျှလူတိုင်းဟာ ဒေါသထွက်စရာ တွေချည်းပါပဲ။
Zwe Thet Paing | Health, Knowledge | September 20, 2017
နားကြပ် (Earphone) များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားစည်ကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး နားနှင့်ပတ်သက်သော အခြားရောဂါများလဲ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နားကြပ် (earphone) နှင့်တွဲဖက်၍သုံးရသော IT ပစ္စည်း (Laptop , Hand-Phone) များကလဲ လွယ် လင့်တကူရရှိနိုင် သောကြောင့် အဆိုပါ IT ပစ္စည်း (Laptop, Hand-Phone) များကို သုံးစွဲရာတွင် မိမိအနီး အနားတွင်ရှိသော အခြားသူများအား အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်အတွက် နားကြပ် (earphone) များကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
All times are GMT 6.5. The time now is 7:17 am.